Madaafiic Goordhawayd Lagu Garaacay Xarunta Madaxtooyada Somaliya. – Heemaal News Network
Madaafiic Goordhawayd Lagu Garaacay Xarunta Madaxtooyada Somaliya.
Waxaa goordhaw tiro madaafiic ah lagu garaacay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana madaafiicda qaar la sheegay in ay ku dhaceen xaafado dad shacab ah degan yihiin.
Goobjoogayaal ayaa sheegay inay sadex madfac kusoo dhaceen agagaarka xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, waxaana mid kamid ah madaafiicda ku dhacay xaafada Kaambada oo ku dhegan Xarunta Taliska Booliska ee Commando Polizio
Madaafiicda lagu garaacay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale la sheegay in mid kamid ah uu ku dhacay meel ku dhaw xarunta Safaarada Itoobiya oo ku dhax taala xarunta Madaxtooyada Soom aaliya.
Wali lama oga kahsaaraha ka dhashay madaafiicdan goordhaw lagu garaacay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, mana jiro ilaa hada wax war ah oo kasoo baxay taliska booliiska oo ku aadan madaafiicdan lagu garaacay Xarunta Madaxtooyada.
Australia Oo soo Saartay Go’aan ka dhan ah Daacishta Somaliya.
Madaxwayne Biixi Oo Saaka Loogu Soo Dhaweeyay Borama.